Ukuqaphela Amazinga e-Tone
true tone-scale /zu-ZA/tools-for-life/tone-scale/steps/the-emotional-tone-scale.html practical 6 6 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/tone-scale_zu_ZA.jpg I-Emotional Tone Scale
6.‎1 ISIVIVINYO ESISEBENZAYO
Iya endaweni enabantu abaningi, njengesiteshi sebhasi noma sesitimela. Khetha umuntu bese uphawula izinga le-tone yakhe. Isibonelo, yima nje bese ukhuluma nothile noma ubukele othile enza okuthile bese ubona ukuthi ungabona ukuthi ukuliphi izinga le-tone. Ungamtsheli umuntu ukuthi ucabanga ukuthi usezingeni elithile le-tone. Lokhu yi drill nje oyenzayo ukukusiza ukuthi uqaphele.
Qhubeka nokwenza lokhu kuze kube yilapho uqiniseka ukuthi ungabona izinga le-tone yomuntu ngendlela abakhuluma noma abaziphatha ngayo.